Erayadii sage, fikir weyn iyo goobjooge Afrikaan ah | KONGOLISOLO
Posted By: Admi1waa: Juun 24, 2017 00: 35 No Comments
* Buffalos wuxuu dilaa dadka 7 sanad walba. *
* Lions waxay dishaa dadka 500 sanad walba *.
* Hippos waa dad dilaa 800 sanad walba. *
* Spiders waxay dilaan dadka 5000 sanad walba. *
* Sanqoryada ayaa dila dadka 7000 sanad walba. *
* Maydhiyadu waxay dilaan dadka 10000 sanad walba. *
Ka dibna, cajiib ah
Kaneecada ayaa 2,7 malaayiin qof ku dilaan sanad walba. Haa, kuwa yari waa kuwa ugu dhimashada badan!
* Dambiyada "yar yar", ee ay qaar badani garteen, ayaa ah kuwa ugu dhimashada noloshaada ruuxiga ah. *
* Ka fogow cudurdaar aan ku tukaneynin isla markaana ku siinayo dhowr daqiiqo oo maalinti ah oo ku saabsan Abuurahaaga. *
* Dembiyadiinaashaha waxaas waa loo dhintaa sida dembiyada loo xilsaaray.
* Xanta iyo yaraanta been-abuurka, waxaa si gooni gooni ah u go'aaminaya waana dhimasho. *
* Iska ilaali kuwa yar yar ee aad maalin kasta sameysid. Waxay keeni doonaan dayrtaada. *
Dadka guuleystaa bushimahooda waxay leeyihiin labo shay, “dhoolla caddeyn & aamus”.
- Dhoola caddeynta ayaa xallin karta dhibaatooyinka, halka
- Aamusnaanta ayaa ka fogaan karta dhibaatooyinka.
Sonkorta iyo cusbada waa la isku dari karaa
Laakiin ants ku diiday milix iyo qaado sonkorta kaliya.
* Dooro dadka saxda ah ee nolosha iyo noloshaadu ka sii fiicnaato kana sii jilcan.
* Haddii aadan ku guuleysan inaad ku guuleysato riyadaada, beddel dariiqyadaada, hana u abuurin Abuurahaaga. *
* Xusuuso, geeduhu way baddelaan caleemahooda, ma aha xididadooda. *
* Waligaa ma gaari doontid halkaad u socotid haddii aad joojiso oo aad dhagxiso dhagax kasta oo kugu dhiba. *
* Ku necebku wuxuu kugu arkaa inaad ku dul soconaysid biyaha oo waxay dhahdaa maxaa yeelay ma dabaalan kartid. *
* Xitaa haddii aad ku dul dul dulubtid biyaha, cadaawayaashaadu waxay kugu dhaarinayaan inaad boodhka riixdo. *
* U samee himiladaada inaad ku noolaato nolol deggan, ku mashquul meheraddaada oo aad ku shaqeyso gacmahaaga. *
Xusuusnow, marna ha la dagaalamin doofaarka. Labaduba waad nadiifsan tihiin, laakiin doofaarku way ku farxi doonaan.
- Hadaad seegto meel uun, ha dhaafin cirka
-Haddii aad seegto ballan, fadlan ha ka maqnaan ka saarista
- Haddii ay qasab kugu tahay inaad cunto wax cunto, fadlan ha moogaanin cashada arooska wanka
-Waxa dhammaadku u dhowdahay; waa halkaan
Sep27 04: 08